Iishelufu ezenziwe ngomthi ezihamba negumbi ngalinye emakhayeni ethu | IBezzia
Iishelufu ezenziwe ngomthi ezihamba kunye negumbi ngalinye ekhayeni lakho
USusana godoy | 02/06/2021 16:00 | Ukuhonjiswa
Xa sicinga ngokuhombisa, kuyacaca ukuba iishelfu zomthi Olunye lolo khetho esinokuze siluphose. Ziyimfuneko ngenene kwaye hayi kwigumbi elinye kuphela ekhaya kodwa ziliqela. Siyithanda njengeenkcukacha zokuhombisa kodwa njengeyunithi yokugcina.
Ke ngoko, iyakuhlala ikhona ehambelana neemfuno zethu kodwa kunye negumbi ngalinye. Ke ngoko, sijonga zonke ezo zinto ziya kusikhupha ngokukhawuleza kwaye ngaxeshanye ziya kugubungela zonke iimbombo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani uhombise igumbi lakho ngalinye kuwo?
1 Iishelufu eziphezulu zomthi zokuhombisa amagumbi okuhlala
2 Iishelufu ezenziwe ngomthi kwidesika okanye kwiindawo zeofisi
3 Izikwere ezisezantsi zamagumbi abantwana
4 Iishelufa ezigqibeleleyo kwigumbi lokulala
5 Ukuhlala ngaphandle kwesahluli sendawo ezantsi
Iishelufu eziphezulu zomthi zokuhombisa amagumbi okuhlala
Mhlawumbi kwigumbi lokuhlala sifuna ukubona ukuba i amashalofu amade amxinwa ahlala kwindawo enkulu. Kuyinyani ukuba kwelinye icala, ukuze ukwazi ukubeka iincwadi, unokuhlala ubheja kwiinqaba ezinde nezimxinwa. Kodwa siyazi ukuba ukudityaniswa kwemodyuli yenye yezona zimvo zibalaseleyo. Oku kukuba sinokubeka uninzi kwezi shelufu, enye ecaleni kwenye. Ke siyakwenza ulwakhiwo olukhulu ukuba olo luthando lwethu kwaye ukuba indawo iyakuvumela oko. Kodwa nokuba kunjani, ewe, kumagumbi okuhlala babheja ngakumbi kwezi shelufu njengeenqaba.
Iishelufu ezenziwe ngomthi kwidesika okanye kwiindawo zeofisi
Kuyinyani ukuba akukho ndlela ithile yokuhombisa, kuba ayinakuphela njengoko kukho iincasa. Kodwa kwiiofisi okanye kumagumbi okufundela, sinokubheja kwiishelufa. Ngele ndlela, Siza kubeka iincwadi okanye iifayile kwaye ziya kuqokelelwa ngakumbi njengoko zibekwe eludongeni. Ngabo siza kugcina indawo eninzi, kuba ukusebenzisa iindonga kuhlala kuyenye yezona ndlela zibalaseleyo sinokukhetha.
Ecaleni kwamashalofu sinokukhetha iishelfu zesikwere ezinokudityaniswa ecaleni kweendonga ngeendlela ezingalinganiyo. Ke, siya kudala ezona mpembelelo zintle kumhombiso wethu. Into elungileyo malunga neeshelfu zomthi kunye neemilo zazo kukuba singazidibanisa njengoko sifuna kwaye sizipeyinte xa ubona kufanelekile. Kungenxa yokuba imibala yenye yezo nkcukacha zokuhombisa sihlala sizifuna.
Izikwere ezisezantsi zamagumbi abantwana
Amagumbi okulala amancinci endlu, nathi siyawafuna uthotho lweeshelfu ezisinceda ekugcineni zonke iithoyi kunye neencwadi. Ke ngoko, akukho nto injengokubheja kwizikwere. Oku kunokufumaneka kwimibala eyahlukeneyo kwaye baya kuba ngaphezulu kokugqibelela ukonwabela indawo enolonwabo kunye nokuchwayita ngokubanzi. Ukongeza kuzo zonke iimodeli esinokuzifumana, kufuneka kuthiwe siyayidinga ukuba ibe ngumthi onganyangekiyo, kuba sele siyazi ukuba asifuni iingozi ezingeyomfuneko.
Iishelufa ezigqibeleleyo kwigumbi lokulala
Enye yeendawo eziphambili ligumbi lokulala. Ke ngoko, sifuna ukuba bahlangabezane neemfuno zale ndawo kwaye ngaphezulu kwako konke, baya kugxila kwinxalenye yebhodi ephezulu. Ke apha sinokufumana iishelufa ezigcina izinto eziyimfuneko njengewotshi yealam, iincwadi kunye nezinye izinto zokuhombisa. Kodwa kuyinyani ukuba ungakhetha ukuma kwiishelufa zokuma kunye neemodyuli, zihlala zixhomekeke kwisithuba onaso. Ngumbono olungileyo ukukwazi ukuyinika uyilo loyilo ngelixa uzama ukugcina yonke into oyifunayo kubo. Ukuba awunasithuba, sele uyazi ukuba iindonga isengabahlobo bethu abasenyongweni.
Ukuhlala ngaphandle kwesahluli sendawo ezantsi
Xa sifuna ukunciphisa indawo, sinayo ilula kakhulu. Singabheja kwimbono enje esekwe kukonwabela ishelufu engenazantsi, oko kukuthi, evulekileyo, kwaye uyibeka Yahlula omabini amagumbi okuhlala kumagumbi okutyela kunye neendawo zokungena. Umbono woyilo oya kuthi ugqibelele ukujoyina zonke iindlela zokuhombisa onazo engqondweni. Uyawathanda amashalofu omthi? Ungazibeka phi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Iishelufu ezenziwe ngomthi ezihamba kunye negumbi ngalinye ekhayeni lakho
Fumanisa iBloom, ingqokelela ye-SS21 yeCompañía Fantástica
Iimbono ze-manicure eziza kutshayela ngeli hlobo lasehlotyeni ngo-2021